ဟာရီကိန်း မာရီယာ ပြန်လည်ထူထောင်ရေး လုပ်ငန်းများအတွက် ပွာတိုရီကိုနိုင်ငံသို့ ဒေါ်လာ တစ်သန်?? - Yangon Media Group
ဟာရီကိန်း မာရီယာ ပြန်လည်ထူထောင်ရေး လုပ်ငန်းများအတွက် ပွာတိုရီကိုနိုင်ငံသို့ ဒေါ်လာ တစ်သန်??
ပွာတိုရီကိုနိုင်ငံတွင် မွေးဖွားခဲ့သည့် ဂျနီဖာသည် ၎င်းမိသားစု ရှိနေခဲ့သည့် ကျွန်းနှင့်ကာရေဘီယမ် ဒေသတစ်လျှောက်တွင် တိုက်ခတ်ဖျက်ဆီးခဲ့သော ယင်းသဘာဝဘေး အန္တရာယ်ကြောင့် ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများဖြစ်ပွားခဲ့ရသည်ကို ထိခိုက်ခံစား ရလျက်ရှိသည်။ မုန်တိုင်းဘေးပြန်လည်ထူထောင်ရန် လုပ်ငန်းများကို ကူညီရန် အစိုးရ၏့ United For Puerto Rico သကမ်ပိန်းသို့ ယင်းကဲ့သို့ ရက်ရောစွာလှူဒါန်းခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ အင်စတာဂရမ်အကောင့်တွင် တင်ခဲ့သည့်ဗီဒီယိုတစ်ခုတွင် ဂျနီဖာလိုပက်ဇ်က ”ပျက်စီးမှုတွေက မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ပါပဲ၊ ကျွန်မနဲ့ ကျွန်မညီမဝမ်းကွဲက ဟိုမှာရှိနေတဲ့ ကျွန်မတို့မိသားစုဆီက သတင်းမကြားရသေးပါဘူး။ ကျွန်မ စိတ်ထဲမှာရှိနေတဲ့ တခြားသူတွေကကူညီဖို့ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတွေ ရှာကြံနေကြတယ်ဆိုတာပါ။ ပွာတို ရီကိုကျွန်းဟာ အာမာနဲ့ မာရီယာဟာရီကိန်းတို့ကြောင့် ထိခိုက်ခဲ့ရပါတယ်။ ဒီနေ့ပွာတိုရီကိုမှာ ကျွန်မတို့ အကူအညီလိုအပ်နေပါပြီ။ ပရိသတ် တွေကလည်းပွာတိုရီကို သမ္မတကတော် Beatriz Areizaga ဆီကို လှူဒါန်း၊ ထောက်ပံ့ပေးကြဖို့ တိုက်တွန်းလိုပါတယ်”ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။
မှော်ကျောက်စာ ရုပ်ရှင် စာလုံးထွင်း ပြိုင်ပွဲနှင့် ပတ်သက်၍ ဒါရိုက်တာ ဝင်းထွန်းထွန်းက ဓာတ်ပ?
ကော့ကရိတ်မြို့ အာရှလမ်းမကြီး၌ ကုန်တင်ယာဉ်နှင့် ဇာတ်အဖွဲ့သားများတင်ဆောင်လာသောယာဉ်တို့ တိ??
လန်ဒန်အနောက်ပိုင်း လူစည်ကားသော ညကလပ်တစ်ခုအတွင်း မျက်ရည်ယိုဗုံး ပစ်သွင်း၊ ဆိုင်အတွင်း လူ ၄??